Fanamboaran-dalana eny Ankorondrano : nampikaikaika ny rehetra ny fitohanan’ny fifamoivoizana | NewsMada
Fanamboaran-dalana eny Ankorondrano : nampikaikaika ny rehetra ny fitohanan’ny fifamoivoizana
Tsy toy ny hatramin’izay! Nanomboka, ny talata teo, ny asa fanamboaran-dalana eny Ankorondrano, mitohy hatreny Alarobia. Tapaka tanteraka ny ilany ampitan’ny orinasa Henri Fraise hatreny anoloan’ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Ny tapany andrefana ihany sisa ny azon’ny fiara ifamezivezena. Ny nahavariana, niteraka voka-dratsy eo amin’ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra manontolo ity fanamboaran-dalana ity. Nahery vaika ny fitohanan’ny fifamoivoizana, miainga any Analamahitsy (avaratra), ny any Ambohimanarina (andrefana) mitohy hatrany Alarobia (avaratra), ny any 67 ha, Antanimena, Behoririka, Andravoahangy, Mascar, Anjanahary. Toraka izany koa ny avy any Analakely hihazo an’Antanimena.
Velon-taraina avokoa ny olona samihafa. Tara fidirana ny mpiasa sy ny mpianatra hamonjy fotoana. Nilaza ny lehilahy iray, R. Tolotra, fa “niainga tany Analamahitsy aho tamin’ny 7 ora sy sasany maraina, hanenjika fotoana eny amin’ny fitsarana Anosy tamin’ny 9 ora, saingy tamin’ny 11 ora vao tonga tany an-toerana”. Nitsotra ny mpamily taxi-be 186 iray fa “tsy mahavita afa-tsy indroa mihodina sisa izahay ao anatin’ny iray andro tontolo, raha tokony hahavita inefatra na indimy. Very 50% ny vola miditra aminay”.
Atao asa tanana
Hita fa orinasa madinika ny manarina ny lalana eto an-dRenivohitra. Tsy misy tsininy izany satria manome vahana sy tombondahiny kely ny orinasa madinika sy salantsalany eto an-toerana. Saingy, mahavariana fa fitaovana tsotra sy asa tanana ny tena ampiasaina, ary azo antoka fa ho vao mainka hitarazoka ny asa. Vonjy taitra sy maika ny asa amin’izao fotoam-pahavaratra izao. Sanatria tsy ho vonjy tavanandro ka handany ny volam-bahoaka fotsiny ny hanaovana ireny asa ireny, satria maro ireo efa “notampintampenana maika” (toy ny mahazatra) nefa simban’ny orana nisesy teo sahady. Ny fatiantoka toekarena sy sosialy ateraky ny fitohanan’ny fifamoivoizana anefa tsy honeran’ny fanjakana velively. Raha maika sy laharam-pahamehana tokoa ny asa, tsy tokony amin’ny alina ve ny fotoana sahaza hanaovana ny asa? Tsy fahita eto amintsika loatra izany.